Jungle Fanahy Jungle Fanahy
Efa manao lalao slot tsapanao ve nanao toa anao no mpanjakan'ny anaty ala? tsara, slots foana ireo izay handresy UK lalao manome anao mihitsy izany karazam-traikefa. Jungle Fanahy: Antsoy ny Wild Tsy vazivazy fa ala ampy harena izay afaka handresy. Miaraka amin'ny tony nefa lalina sy maizina ala eo aoriana, ity lalao ity na inona na inona latsaky ny iray milay traikefa nahafinaritra. Misy bibidia izay mitandrina manaitra anao amin'ny mirohondrohona sy ny fahavinirana izay mahatonga ny lalao traikefa iray mampientam-po. Ny bunch ny fireflies manidina foana manerana ny efijery izay toa tena mahagaga.
Momba ny developer ny Fanahy Jungle: Antsoy ny Wild :
Ny developer dia NetEnt izay malaza noho ny famoronana slot lalao amin'ny mahatalanjona lohahevitra sy ny saina-fitsofana sary mba hamitahana ny sainao. Izy ireo ny sasany amin'ireo tsara indrindra foana slots izay handresy UK lalao fa afaka mahazo aterineto sy hahazo valisoa lehibe ny sasany izay mety ho manan-karena anao.
Ataovy ao an-resahana tao anaty ala mikitroka iray, dia afaka mahita ny slots nanakodia miaraka amin'ny marika mahatalanjona izay mitandrina nahasarika anao. Misy zava-dehibe dimy avo-marika amin'izao slots foana izay handresy UK lalao; Tigra, voay, vipera, hitondra sy elefanta milalao miaraka amin'ny karatra avy 10 ny A. Ny tigra no ambony indrindra sarobidy rehetra dimy tamin'izy ireo amin'ny payline izay mari-pankasitrahana anao 150 fotoana ny tsatòka. Ity lalao ity tolotra 1024 fomba mahagaga tombony handresy amin'ny lafin-javatra toy ny mariky fanitarana, lolo tosika ka ampielezo.
Symbol Expansion: Araka ny anaran-kevitra rehetra ny lalao afa-tsy ny marika atao nitarina aelezo ho amin'ny tsirairay avy reels. Izany no mitranga rehefa misy famantarana miaraka amin'ny lolo mamirapiratra eo toa tsy mandresy miaraka amin'ny fitambaran'ny. Ny lolo nopetahany takela-bolamena avy eo dia mampitombo ny mariky ny miraingiraingy azon'ny manontolo manao ny winnings lehibe sy tsara kokoa. Ny mety eto no mety ho famantarana mihoatra ny iray izay afaka hanitatra Ary rehefa dimy tigra marika toy izany bebe kokoa miaraka rehetra, mandresy ianao 1024 fotoana ny tsatòka.
ampielezo: Ao amin'io slots foana izay handresy UK ny aelezo marika dia aseho amin'ny alalan'ny voninkazo lota sy telo na mihoatra amin'ireo loka anareo tsy ho andevo afaka spins. Raha mahazo 4 na 5 spins dia afaka handresy 15 na 50 indraindray ny tsatòka, ankoatra ny maimaim-poana spins. Fa ny isan'ny spins maimaim-poana, ianao tena mahazo misafidy fa ny tenanao ary afaka misafidy 4, 8, 12, 16 na 20 spins. A kely indrindra spins isan'ny mahazo anao lanjany ambony kokoa Fandresena, raha mbola 20 spins dia kelikely kokoa ihany no hanome vola anao mandresy.
famintinana: Slots foana ireo izay handresy UK lalao manome ny ambony indrindra ho an'ny fahafahana isan'ny Mega ary faran'izay Mega Fandresena izay afaka handresy anao an'arivony kilao in-bola. Ny ambany indrindra Bet ao 20p ity lalao ity ary indrindra ny £ 100 isan-kofehy ireny.
Dual Storm Siberia Play